Faribolana Sandratra: 23 notolorana mari-boninahitra | NewsMada
Faribolana Sandratra: 23 notolorana mari-boninahitra
Vao manomboka ny taona, hita ho miramirana sy velombolo ny tontolon’ny asa soratra eto Madagasikara. Nisantatra izao taona vaovao izao ny fanokafana ny fanamarihana ny tsingerintaona faha-30 niorenan’ny Faribolana Sandratra.
Notanterahina, omaly tetsy amin’ny foiben’ny Akademia Malagasy etsy Tsimbazaza, ny lanonam-panokafana ny fanamarihana ny tsingerintaona faha-30 ijoroan’ny Faribolana Sandratra. Maro ny olo-manan-kaja sy tompon’andraiki-panjakana tonga nanotrona izany. Tsy latsa-danja ihany koa ireo mpikambana avy amin’ny faritra samihafa.
Sehatra iray ivondronan’ny poeta sy ny mpanoratra malagasy ny Faribolana Sandratra. Tao anatin’izay 30 taona ijoroany izay, tsy nitsahatra niparitaka sy nisandrahaka amin’ny faritra maro ny fikambanana, izay mihetsiketsika fatratra amin’ny fampiroboroboana sy fanabeazam-boho ny literatiora malagasy.
Faribolana Sandratra, araka izany anarany izany, tsy vitsy ireo nisandratra sy nivelatra tao anatin’izany fikambanana izany. Nisasatra tamin’ny fanehoana fa tsy latsa-danja ary manana ny maha izy azy ny literatiora malagasy, nisongadina tamin’ny maro ary nahavita be tamin’ny fikoloana ny kanto.
Ny fotoan-dehibe toy izao indrindra no mendrika hanolorana fankasitrahana ireo nahavita soa eo anivon’ny fikambanana. Omaly àry, miisa 23 ireo mpikambana amin’ny Faribolana Sandratra, avy amin’ny faritra samihafa, notoloran’ny minisitry ny Asa tanana, ny kolontsaina sy ny fiarovana ny vakoka, mari-boninahitra: 10 “officier de l’ordre national” ary 13 “chevalier de l’ordre national”. Teny filamatra noraisin’ny mpiray faribolana ny hoe “Mamorona fa tsy mamerina” izay novelabelarin’ny Dr Rakotomavo Tsikimilamina.
Taorian’izay fanolorana mari-boninahitra izay, nisesisesy ireo fandraisam-pitenenana, samy nanasongadina ny maha zava-dehibe ny fijoroan’ny sehatra iombonana na ihaonan’ny poeta sy mpanoratra, toy ny Faribolana Sandratra. Notsiahivin’i Ranöe, mpanoratra tsy ampahafantarina intsony, ihany koa ny niandohan’ny fikambanana sy ny lalana efa nodiaviny.
Santatra am-bavarano ny omaly fa mbola maro ireo hetsika samihafa hoentin’ny Faribolana Sandratra manamarika ny tsingerintaona faha-30 ijoroany. Anisan’izany ny “Saramba mikalo”, ny 26 janoary etsy amin’ny CGM Analakely.